Catherine O’Hara – Cast – Channel Myanmar
The Addams Family(2019) The Addams Family(2019) (unicode) တလောက ရုံတငျသှားခဲ့တဲ့ အဒမျဈမိသားစု ကာတှနျးလေး လာပါပွီ။ ဇာတျလမျးကတော့ ဟိုတယျထရနျဆဗေးနီးယား နဲ့ နညျးနညျးဆငျပါတယျ။ အဒမျမိသားစုဟာ သီးခွားဆနျစှာ ထူးထူးဆနျးဆနျးနတေတျတဲ့ မိသားစုတှပေါ။ အပွငျလောကကို စိတျကုနျပွီးရှောငျပုနျးနသေူတှဆေိုလညျးဟုတျပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ သူတို့အိမျရှိနတေဲ့ တောငျကုနျးရဲ့အောကျမှာ အိမျအလှဆငျလုပျငနျးရှငျ မာဂေါ့ နိဒလာက မွို့အိမျယာအသဈလာတညျထောငျပွီး လူတှကေို ကွျောငွာပွ ရောငျးခဖြို့ စီစဉျပါတော့တယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ အိမျယာရှုခငျးမှာ အရုပျဆိုးနတေဲ့ အဒမျဈစံအိမျကွီးက ဖကျြနတေော့ မာဂေ့ါနဲ့ အဒမျဈမိသားစု ထိပျတိုကျတှဖေို့ ဖွဈလာပါတော့တယျ။ ဒီကာတှနျးလေးကတော့ သရျောကာတှနျးအမြိုးအစားပါပဲ။ အခြို့သောလူတှရေဲ့အူကွောငျကွောငျစိတျကူးတှေ၊ ဆိုရှယျမီဒီယာ အယုံလှယျတာတှေ စတာမြိုးတှကေို အတညျပေါကျနဲ့ ထိထိမိမိလေးလှောငျထား တှယျထားပါတယျ။ ရယျလညျးရယျရသလို ဆှဲဆောငျမှုလညျးရှိပါတယျ....Animation ကားကွိုကျသူတှအေတှကျ လှနျစှာစိတျကနြေပျစမေယျ့ ကားလညျးဖွဈပါတယျ..ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျသူကတော့ Littleneo ပဲဖွဈပါတယျ.... (zawgyi) တလောက ရုံတင်သွားခဲ့တဲ့ အဒမ်စ်မိသားစု ကာတွန်းလေး လာပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဟိုတယ်ထရန်ဆဗေးနီးယား နဲ့ နည်းနည်းဆင်ပါတယ်။ အဒမ်မိသားစုဟာ ...
IMDB: 6.0/10 8120 votes
The Nightmare Before Christmas (1993) ဒါကတော့ နာမညျကွီး Dark Gothic movieတှကေိုဖနျတီးလရှေိ့တဲ့ Tim Burtonကွီး produceလုပျထားတဲ့ Stop-motion animated musicalအမြိုးအစားလေးပါ။ Ratingအကွမျးစားတှရေော၊ musicalကားဆိုတော့ သီခငျြးဆုတှရေော၊ Oscarဇကာတငျတှရေောရထားတဲ့ တဈခတျေတဈခါက ဇာတျလမျးကောငျးလေးပါ။ ဇာတျလမျးကတော့ အဲ့ခတျေကာလမှာ အားလပျရကျပြျောပှဲရှငျပှဲတှကေို လုပျဆောငျရတဲ့မွို့အသီးသီးရှိတယျပေါ့။ အီစတာမွို့၊ ဟျောလိုဝငျးမွို့၊ ခရဈစမတျမွို့ အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။ ဒီကားရဲ့ဇာတျလိုကျကြျော ဂကျြက ဟျောလိုဝငျးမွို့ရဲ့ ရှဖေရုံသီးဘုရငျပေါ့ ခွောကျလှနျ့တဲ့နရောမှာအထငျကရဖွဈတဲ့ အရိုးခွောကျပေါ့။ အားလုံးကသူ့ကို အမွဲခြီးမှမျးနပေမေယျ့ သူကတော့ ဟျောလိုဝငျးမှာ လိုကျခွောကျလှနျ့နရေတာကို စိတျကုနျနပေါပွီ။ နောကျတော့ ခရဈစမတျမွို့ထဲရောကျသှားတဲ့အခါမှာ ဟျောလိုဝငျးဘုရငျက ခရဈစမတျလုပျမယျလို့ကွံစညျရငျး သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ ခရဈစမတျကိုဆငျနှဲတဲ့ဇာတျလမျးလေးပါ။ ခံစားကွညျ့ရှုလိုကျပါအုံး။ File Size : ( 714 GB , 308 MB ) Quality : WebRip 720p Running Time : 1 hr ...
IMDB: 8.0/10 273,928 votes
Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004) A Series of Unfortunate Events (2004) ======================= တစ်ချို့လူတွေကတော့ ရက်စက်အကျည်းတန်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ရင်း ပျော်ရွှင်စရာဇာတ်သိမ်းတွေမှာ သက်သာရာရှာရင်း ဘာမှမဟုတ်သလို ဘဝကို ကုန်ဆုံးတတ်ကြတယ်။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမှာတွေ ရှိနေသေးတာကိုသိပြီး သုတေသနလုပ်ရင်း မှတ်တမ်းတင်ရင်း ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ဘဝကိုကုန်ဆုံးတတ်ကြတယ်။ အခုဇာတ်လမ်းကတော့ အဲ့ဒီ အစွန်းနှစ်ဖက်က လွတ်တဲ့လူတွေအကြောင်းပါ။တစ်ခုခုကို တီထွင်တာလို.. စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်တာလို..အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ထင်ရတဲ့ အရာတွေကနေ ..ဘာမှမဟုတ်ပဲ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုက်ကိုက် နေတတ်တာလို အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးထင်ရတဲ့အရာတွေအပါအဝင် တစ်ခုခုတွေကို လုပ်ရင်း အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေတွေမှာ မျှော်လင့်ချက်ရှိစွာပဲ ရှင်သန်တတ်ကြတဲ့ လူတွေအကြောင်းပါ။ သူတို့သိထားတဲ့ အသိကတော့ အခြေအနေ ဘယ်လောက်ပဲဆိုးဝါး စုတ်ပြတ်နေပါစေ တစ်ခုခုတော့ အမြဲရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ဒီလူတွေကတော့ Baudelaire မောင်နှမသုံးယောက်ပါ။ အကြီးဆုံး Violet Baudelaireကတော့ စွန့််ပစ်ထားတာတွေ.. ကြားမှာ အသုံးဝင်တာတစ်ခုခုတော့ရှိတတ်ပြီး အမှိုက်ဆိုတာလည်း နေရာလွဲမှားနေတဲ့ တန်ဖိုးရှိပဲ ပစ္စည်းဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု တီထွင်နေတတ်တဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပါ။ အလတ်ဖြစ်တဲ့ Klaus Baudelaireကတော့ စာအုပ်တွေကြားမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ စာကြမ်းပိုးကလေးဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးလေးကတော့ တွေ့ကရာ လိုက်ကိုက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူတို့ မိသားစုရဲ့ အိမ်ကြီးကို ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်မှန်း မသိတဲ့ မီးလောင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီး။ မီးထဲမှာ သူတို့မိဘတွေပါပါသွားတာကြောင့် သူတို့မိဘမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး မိဘမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ကလေးသုံးယောက်ရဲ့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမှုတွေဟာ ဒီတစ်ခုနဲ့ ...
IMDB: 6.8/10 183,639 votes
Home Alone 2: Lost in New York (1992) Instead of flying to Florida with his folks, Kevin ends up alone in New York, where he getsahotel room with his dad's credit card—despite problems fromaclerk and meddling bellboy. But when Kevin runs into his old nemeses, the Wet Bandits, he's determined to foil their plans to robatoy store on Christmas eve. File size…(1.1 GB) ...
Over the Hedge ကဲပါ ဒီတစ်ခေါက် အူတက်နေအောင် ရယ်ရပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ ဆောင်းခို သတ္တ၀ါ လေးတွေ ရဲ့ အစားအစာ ရှာဖွေတော်မူခန်း ကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် DreamWorks Animation ရဲ့ ထုတ်ကုန် ဆိုရင် ပြောနေစရာမလိုအောင် ကောင်းပြီးသားမှန်း သိမှာပါ ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ လိပ်ကလေး တစ်ကောင် ဦးဆောင်တဲ့ ဆောင်းခို အဖွဲ့ဟာ တစ်ခုသော နွေရာသီမှာ သူတို့ အသိုက်ကနေ ထွက်လာကြပြီး ကျန်တဲ့ ဆောင်းရာသီ အတွက် အစာရှာဖွေခြင်း လက်ရှိရာသီ အတွက် အသက်ရှင် နေထိုင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းမှု များကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ မသိလိုက်တာက သူတို့ ဆောင်းခိုနေစဉ် ကာလ အတိုလေးမှာပဲ သူတို့ တောအုပ်လေးကို ကွပ်လပ်လေး တစ်ခုအဖြစ် အလယ်ဗဟိုထားပြီး မြို့သေးသေးလေး တစ်ခု ဆောက်လုပ်လိုက်တာပါပဲ ဒီတော့ သူတို့ အတွက် အစာရေစာ ရှားပါးသည့် အပြင် လူသားတွေ ရဲ့ သက်ဖြတ် နှိမ်နှင်းမှု ကိုလဲ ခံရနိုင်ပါတယ် ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ? အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ လူတွေ ကို လှည့်စားပြီး အစာရှာနည်းသင်ပေးမယ့် ကြောင်လည်ပတ်ကား တောကြောင် တစ်ကောင် သူတို့ မိသားစုလေးထဲ ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက် ရောက်ရှိလို့ ...
The Right Kind of Wrong Leo the dishwasher falls in love withabride on the day of her wedding - to another man. အပန်းဖြေကြည့်ဖို့အတွက် The Right Kind of Wrong ဆိုတဲ့ Romance Comedy လေး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒ်ီကားလေးဟာဆိုရင် လီယိုပါလာမီနိုဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။သူဟာဆိုရင် စိတ်ကူးအကြီးကြီးယဉ်လေ့ရှိပြီး မဖြစ်နိုင်တာတွေကို တောင့်တတက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ဘေးက်နေအကြံပြုဝေဖန်တာတွေကို ဂရုမစိုက်သလို လုံးဝ နားထောင်လေ့မရှိပါဘူး။သူ့အိပ်မက်က စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ နာမည်ကျော် ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ကျမှ ဖြန့်ချီမယ်ဆိုပြီး ရည်မှန်းသူပါ။အလိုက်လဲမသိတက် မိန်းမကိုလည်း ကြင်နာရကောင်း မှန်းမသိတဲ့ သူဟာ မိန်းမနဲ့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကိုသူ့မိန်းမက Why You Suck ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဘလော့တစ်ခုထောင်ပြီး သူ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုရေးသားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ သူတို့ကွဲကျတဲ့ အချိန်မှာ သူက ပန်ကန်းဆေး သမားဘ၀ရောက် သူ့မိန်းမကတော့ Why You Suck ဘလော့နဲ့နာမည် ကြီးသွား ပါတော့တယ်။သူလဲ ...